ဆွေးနွေးချက်:ကမ္ဘာဂြိုဟ် - ဝီကီပီးဒီးယား
GA Review စတင်လိုက်ပါပြီ။ Review လုပ်ရာတွင် အောက်ပါ Template ကို အသုံးပြုပါမည်။ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၃:၅၀၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အခုလို ထောက်ပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် ဘာသာပြန်တာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနိုင်တာမို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်သွားပါမယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၆:၃၁၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အခုပြောထားတဲ့ ပြဿနာတွေပြေလည်သွားရင် GA pass ဖြစ်ပါမယ်ဗျ။ copy editing တော့ ကျနော်ပဲ ဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၆:၄၃၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Dr Lotus Black: review လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။ 1b နဲ့ 6b က ပြဿနာတွေပြေလည်သွားရင် ဒီဆောင်းပါးက GA ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွမ်းမံဖို့ အချိန်လိုအပ်ရင် ၇ ရက် ရပါမယ်။ We can definitely bring it to GA. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၇:၄၂၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Saya Dr Lotus Black, I think you've unintentionally reverted my copy editing while you fixed the issues. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၉:၂၈၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Sorry, bro Htanaungg, i didn't know you were editiing, i was fixing some sentences which you suggested. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၉:၃၃၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
No worries, Saya Dr Lotus Black, I'll fix them back. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၀၉:၅၀၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Dr Lotus Black: ဒီဆောင်းပါးဟာ ဆောင်းပါးကောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ GA အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ Congratulations to you and anyone else who may have worked on it. ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၁၀:၂၉၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆောင်းပါးကောင်းအဖြစ် ဆန်းစစ်ခြင်း (ဆောင်းပါးကောင်းအင်္ဂါရပ်များကို ဤနေရာတွင်လည်းကောင်း၊ ​ဆောင်းပါးကောင်းအင်္ဂါရပ်များက ဘာမဟုတ်ဘူးလဲကို ဤနေရာတွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုပါ။)
အတော်အသင့် ​ကောင်းမွန်စွာ ​ရေးသားထားသည်။
က (စကားပြေ၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ၊ သဒ္ဒါ): ခ (နိဒါန်းစာပိုဒ်၊ ဆောင်းပါးအပြင်အဆင်၊ သတိထားသုံးရမည့် စကားလုံးများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများအတွက် ရေးသားနည်းလမ်းညွှန်ချက်များ):
အတော်လေး ပြည်စုံကောင်းမွန်ပေမဲ့ "ရေဒီယိုမက်ထရစ်" ဆိုရင် သိပ္ပံပညာနဲ့ မနီးစပ်သူတစ်ယောက် ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာလဲဆိုတာ သိဖို့မလွယ်ကူတဲ့အတွက် note အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်မူရင်းစာလုံးနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
"ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ သမိုင်း" section မှာ Geology က ဘူမိဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ ပထဝီဝင်က Geography ပါ။ ကမ္ဘာ၏ လေထုနှင့် သမုဒ္ဒရာများသည် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဖြစ်တည်ခဲ့သည်။ ယင်းမှ ရေငွေ့များသည် သမုဒ္ဒရာထဲသို့ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ ကြယ်တံခွန်များနှင့် ဥက္ကာခဲများ၏ရေခဲမှ ရေများသည်လည်း ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်က မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေငွေ့များ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ကြယ်တံခွန်၊ ဥက္ကာခဲများမှ ရေခဲများ သမုဒ္ဒရာတွင်း စီးဝင်ခြင်းတို့က ကမ္ဘာ့လေထုနှင့် သမုဒ္ဒရာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လို့ ပြောချင်တာပါလား။ ဤစံနမူနာပုံစံတွင် ဆိုတာ ဘယ်စံနမူနာပုံစံပါလဲ။ ၃.၅ ဘီလီယံနှစ်ကြာသော် ဆိုတာ "ကမ္ဘာဖြစ်တည်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၃.၅ ဘီလီယံကြာသော်"ကို ဆိုလိုတာလား၊ "နေသည် လက်ရှိတောက်ပမှု၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိသေးသောအချိန် လေထုထဲရှိ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များသည် သမုဒ္ဒရာများကို အေးခဲမသွားစေရန် ထိန်းကျောင်းပေးပြီး နှစ်ပေါင်း ၃.၅ ဘီလီယံကြာသော်"ကို ဆိုလိုတာပါလား။
simulation နဲ့ Challenger Deep ကို မြန်မာလို ဒါမှမဟုတ် မြန်မာအသံထွက်နဲ့ဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
All fixed, pass
အချက်အလက်အားဖြင့် တိကျမှန်ကန်မှုရှိပြီး စိစစ်အတည်ပြုခံနိုင်သည်။
က (ရည်ညွှန်းကိုးကားစာရင်း): ခ (ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်များကို ကိုးကားထားခြင်း): ဂ (ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ထားသော အချက်အလက်များ): ဃ (မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် စာကူးချခြင်း):
All citations look reliable, as they are also cited in enwiki.
က (အဓိကအကြောင်းအရာ): ခ (ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်ရာကိုသာ အာရုံထားခြင်း):
Pass, no issues.
Pass, no NPOV issues.
တည်းဖြတ်မှုတိုက်ပွဲ စသည် မရှိ:
Only Dr Lotus Black has edited in the past few days; no edit wars; pass
ရုပ်ပုံများ နှင့် အခြားမီဒီယာများကို ဖြစ်နိုင်ပါက တတ်နိုင်သရွေ့ ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြထားသည်။
က (ရုပ်ပုံများသည် သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များကို ဖော်ပြထားပြီး အခမဲ့မဟုတ်သောအကြောင်းအရာများတွင် မျှတစွာသုံးစွဲခွင့် ပါရှိ): ခ (ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆီလျော်ပြီး သင့်လျော်သော ပုံစာများ ပါရှိ):
Infobox caption မှာ "အပြာရောင်ပုလဲလုံး" သက်သက်ထက် "အပြာရောင်ပုလဲလုံး" အမည်ရ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ရုပ်ပုံက ပိုသင့်တော်မယ် ထင်ပါတယ်။ ("အပြာဖျော့အစက်"လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း။)
နောက်တစ်ပုံက စိတ်ကူးယဉ်ရေးဆွဲထားသော နေအဖွဲ့အစည်းရှိ ဂြိုဟ်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဂြိုဟ်ချပ်ပြားများ ဆိုရင် နေအဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ကူးယဉ်ရေးဆွဲထားတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာအား တိမ်ဖုံးလွှမ်းထားသည့် နာဆာ၏ ဂြိုလ်တုရုပ်ပုံ မှာလဲ တိမ်ဖုံးအောင် နာဆာက လုပ်တဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။
မှိုများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိလောကများထဲမှ တခုဖြစ်သည်။ ဆိုတာမျိုးက အင်္ဂလိပ်ဝါကျသဘောလို ဖြစ်နေပါတယ်။ မှိုသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ က ဖတ်ရပိုချောပါမယ်။
Pass, issues fixed.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:ကမ္ဘာဂြိုဟ်&oldid=722232" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။